Man City Waa Boqorka Guulaha ee Premier League – Gool FM
Man City Waa Boqorka Guulaha ee Premier League
Byare December 14, 2017
(England) 14 Dis 2017. Kaddib guushii 4-0 ay xalay ka gaareen Swansea City, Manchester City ayaa Rikoodh kale oo cusub u dhigtay Premier League.
Wiilasha Guardiola ayaa gaaray guushii 15-aad oo xiriir ah waana guulihii ugu badnaa ee is xiga iyadoona jabisay Rikoodhkii Arsenal ee ahaa 14.
Man City ayaa guulaha is xig xiga ay gaartay waxaa ka mid ah 5-0 ay ku martay Liverpool, gool madi ah ay ku nustay Chelsea iyo ciyaartii dhawaan ee Derby Manchester ay 2-1 uga adkaatay kooxda Jose Mourinho.
Tijaabada xigta ay Man City mari doonto ayaa ah marka ay la ciyaareyso Tottenham.
EEG Kooxaha Guulaha ugu badan ee xiriirka ah gaaray Premier League.
SAWIRRO: Taageerayaasha Milan oo foori & aflagaaddo iskugu daray Donnarumma!!
Eric Bailly oo saalada la saari doono kaddib Jose oo rajo xumo ka muujiyay